Sary nomena Maroantsetra
Isika mpampianatra, nahoana no tsy fehezina ny ankizy hanadio ny toeram-pianarana, amboly sy hanao zaridaina manodidina hanatsara ny toerana? Anga ny fanenjehana programa ihany no fanabeazana.
Isika mpianatra, tiantsika ve no hiaina anatin'ny loto.
Izahay mpianatry ny frera nadoa écolage, fa zahay daholo no mitady kofafa, manadio trano, mitady ravitseva sy vakitavoangy mikiky tabilio, sy manositra gorodona mba ampadio ny trano, eny hatramin'ny famafana sy fanadiovana WC mbola izahay daholo.
Ny Ray amandreniko no nanentana ny komitin'ny Ray amandrenin'ny mpianatra nanangana ny sekoly nianaranay, izay lasa lycée goavana aty aoriana.
Mora ny manome tsiny, ary tsy mety tokoa ny ataon'ny Fanjakana, fa zanatsika izy ireo, aza avela anaty fako fa mba mitsangana ihany koa isika Ray aman-dreny, isika mpampianatra, isika mpianatra.
Hafa indray raha hoe aleo tsy hianatra ny zaza fa dia avela ho bado. Ny mpitondra efa bado na minia manao bado sy manabado, isika koa mbola mitoetra anatin'ny fahabadoana.
Aza zatra miandry fanampiana lava, fa mitsangana manao izay vita aloha.